शिक्षा – Pahilo Page
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)को नतिजा आजै सार्वजनिक गर्दैछ । विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनलाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकशन गर्न थालेको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० को एसइइ परीक्षा २०७७ को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न...
भालुबाङ । गोरखा ग्रुप दाङद्वारा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको छ । भालुवाङ बजारनजिकै राप्ती गाउँपालिका— २, लालमटियामा निर्माण गरिने विद्यालय भवनको शिलन्यास गरिएको हो । गोरखा ग्रुप दाङका अध्यक्ष मानबहादुर बुढा मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न विद्यालय भवन शिलान्यास समारोहको प्रमुख अत...
नमस्कार सबैमा । सधैजसो यसपटक पनि तपाईंको सेवामा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचरसम्बन्धी समाग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ । आशा छ, यसपटकको सामग्री पनि तपाईलाई अवश्य नै मन पर्ने नै छ । दशैं वा बडादशैं (अन्य नाम ः दशहरा, विजयादशमी, नवरात्र आयुध) पूजा नेपालीहरूको प्रमुख चाड मानिन्छ । दुर्गा पक्षसमेत भनिने दशैँको पहिलो द...
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध योजना निर्माण तथा पूर्वतयारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरु राजधानीमा आइपुग्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरु राजधानी बोलाउनु भएको हो । सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग कोरोना भाइरसको संक...
तुलसीपुर, १२ बैशाख । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा समितिले नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि १३ वटा विद्यालयलाई कक्षा थपको स्वीकृत दिने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले आव्हान गरेअनुसार यस क्षेत्रका २८ विद्यालयले कक्षा थपका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएपछि स्थलगत अध्ययन, पूर्वाधारको अवस्था र विद्यार्थी संख्यालाई आधार मान...
दाङ, १५ बैशाख । दाङ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमको लागि शैक्षिक सामग्री वितरण शुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम दाङका जिल्ला संयोजक हल्लुप्रसाद चौधरीका अनुसार जिल्लाका ४ सय २१ सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने छ । माध्यमिक विद्यालय कालाकाटेमा गत बुध...
दाङ, १३ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको र राजनीति गरिएको त सबैलाई थाहै छ । तर, अखिल नेपाल शिक्षक संघले भने शिक्षकहरुलाई पेसागत सीप विकास गर्नका लागि तालिम दिएको छ । संघको तुलसीपुर नगर कमिटीले तुलसीपुरस्थित हाम्रो पहुँच स्कुलमा एकदिने तालिमको आयोजना गरेको हो । अखिल नेपाल शिक्षक संघ तुलसीपुर नगर कमिटीका अध्यक्ष तुलसी भ...
कसरी पुगे ६४ देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तुलसीपुरका ३ बालिकाहरु ?
काठमाडौं, १० कार्तिक । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बालिकाहरुले पनि सहभागिता जनाएका छन् । टिच फर नेपालको आयोजनामा ६४ देशका ५ सय शैक्षिक व्यक्तिहरुले सहभागिता जनाएको सम्मेलनमा पशुपति मावि कक्षा ८ मा अध्ययनरत निमा चौधरी, कालाखोला मावि कक्षा ७ मा अध्ययनरत पूजा थापा र कक्षा ६...
कक्षा १२ को मौका परीक्षाको परिणाम आयो, यसरी हेर्नुस् नतिजा
काठमाडौं, ३ असोज । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (मौका) परीक्षाको नतिजा बुधबार सार्बजनिक गरेको छ । बोर्डले गत भदौ १६ गते संचालन गरेको परीक्षाको नतिजा सार्बजनिक गरेको हो । उक्त परीक्षामा ७६ हजार २ सय २७ जना परीक्षार्थी सम्मेलित भएका थिए । नतिजा कसरी हेर्ने ? आफ्नो मोबाईल को म्यासेज बक्समा गइ NEB ...
काठमाडौं, २० भदौ । सबैलाई बोझिलो लाग्ने तर नभएर नहुने ! प्रायः नेपालीहरुको आफ्नै मातृभाषाको लेखनचाहिँ अशुद्ध हुन्छ । तपाईं पनि त्यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ ? हो भने अब चिन्ता नलिनुस् । तीजको मौसम छ, तीज गीतको भाकामा एउटा अत्यन्तै ज्ञानवद्र्धक गीत आएको छ । त्यही गीत बजाउनुस्, मज्जाले नाच्नुस् र नाचसँगै सजिलै पारामा ह्र...